जव सासु नै ज्वाईसंग सल्केर बच्चा पनि जन्माइन्, ज्वाइँ पनि छोरिलाइ छोडेर लिएर भागे सासु ! - Kohalpur Trends
जव सासु नै ज्वाईसंग सल्केर बच्चा पनि जन्माइन्, ज्वाइँ पनि छोरिलाइ छोडेर लिएर भागे सासु !
एजेन्सी । छोरीको हनिमुनमा संगै गएकी आमाले ज्वाई टिपेर हिडेपछि छोरीको हालत कस्तो भयो होला ? यो दुनियामा कहिलेकाहीँ यस्तो अचम्मको घटना पनि हुन्छन् जसले मानिसलाई आश्चर्यमा पार्छ । एउटी आमाले आफ्नी छोरीमाथि यस्तो गर्न पनि सक्छिन् होला भन्ने सोच्न गाह्रो हुन्छ । आफ्नै ज्वाईसंग पोइल गएर छोरीलाई धोका दिने आमा पनि यो संसारमा छन् । बेलायतको लण्डनमा भएको यस्तो घटनाले विश्वको ध्यान तानेको छ ।
Previous Previous post: नेपालगञ्जमा अप्टिमिस्ट क्लब
Next Next post: ६७३१ जनामा परीक्षण गर्दा १४४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि